Andian-tsarimihetsika izay azonao jerena ao amin'ny HBO alohan'ny faran'ny taona | Bezzia
Andian-tsarimihetsika izay azonao jerena ao amin'ny HBO alohan'ny faran'ny taona
Maria vazquez | | ankehitriny
Ny faran'ny volana aogositra dia hanamarika ny faran'ny fialantsasatra ho an'ny maro. Ny sasany, na dia nankafy ny fialantsasatra nandritra ny fotoana lava aza izahay, dia tsy hiverina amin'ilay mahazatra mahazatra mahazatra amin'ny fararano mandra-pahatongan'izany. Fomba mahazatra hiverenantsika ankafizo ny andiany fa ny sehatra mivantana satria tsy maintsy manolotra anay ny HBO.
Alohan'ny faran'ny taona dia afaka mijery amin'ny HBO isika: Tsiambaratelo momba ny fanambadiana sy ny zavatra hafa rehetra. Andiany roa izay hizara ny fahalalàhana amin'ny premiere an'ny vanim-potoana vaovao amin'ny Succesions, ankoatry ny hafa. Jereo hoe inona no ao ambadik'ireo lohateny sy fizaran-taona vaovao miaraka aminay.
1 Tsiambaratelon'ny fanambadiana
2 Succesions (vanim-potoana faha-3)
3 Zavatra hafa rehetra
Amin'ny 12 septambra, hivoaka ao Etazonia ny tsiambaratelon'ny fanambadiana, andiany izay ho hitantsika ny andro any Espana. Ny andian-dalao Oscar Isaac sy Jessica Chastain Notarihin'i Hagai Levi, tompon'andraikitra amin'ny sasany amin'ireo angano malaza indrindra tato ho ato, toa ny The Affair na In therapy, iray amin'ireo famokarana malaza indrindra amin'ny HBO.
Ny andiany dia mamerina, revision maoderina ny Ingmar Bergmanen kilasika izay tamin'ny 1973 dia tonga tamin'ny fahitalavitra soedoà. Ny tsiambaratelo momba ny fanambadiana dia minisery namaky tany an-toerana izay niresahana ny zava-misy eo amin'ny mpivady miatrika ny demoniany.
Ankehitriny, efa ho efa-polo taona taty aoriana, manomana ny premiere ny HBO amin'ny alàlan'ny famoahana fahitana vaovao momba ny fitiavana, fankahalana, faniriana, tokana, fanambadiana ary fisaraham-panambadiana amin'ny alàlan'ny mason'ny a mpivady amerikana amin'izao fotoana izao.
Succesions (vanim-potoana faha-3)
Ny fianakavian'i Roy dia hiverina amin'ny fombany taloha amin'ny vanim-potoana vaovao izay hisantatra premiere amin'ny HBO amin'ity fararano ity. Vanim-potoana fahatelo izay hamaha ny famaranana manaitra amin'ny vanim-potoana farany, izay iorenan'ny hadilan'ny ady izay mampanantena fa manaintaina ny tratran'ny Waystar Royco.
Ny fifandimbiasana izay nanomboka tamin'ny 3 Jona 2018 tao amin'ny HBO dia manisa ny fahoriana tamin'ny «fianakaviana Roy - Logan Roy sy ny zanany efatra lahy - izay mifehy ny iray amin'ireo mpiangona haino aman-jery sy fialamboly lehibe indrindra eto an-tany. Ny andiany dia mamantatra ny fiainany rehefa misaintsaina ny ho avy izy ireo raha vao miala ao amin'ilay orinasa ny patriarka ao amin'ny fianakaviana. Noforonin'i Jesse Armstrong, miaraka amin'i Will Ferrell sy Adam McKay izay mpamokatra mpanatanteraka, nahatonga azy io ho andiany fahatelo amin'ny fahasalamana tena salama.
Zavatra hafa rehetra
Abril Zamora dia manoratra, mitarika ary mitarika kintana ao amin'ny Todo lo otro, vaovao iray izay hotanterahin'i HBO alohan'ny faran'ny taona ary ilazana izany, tsy misy sivana na tsy misy fisedrana, ny tantaran'ny vondrona misy telopolo zavatra voafandrika amin'ny fiainana izay tsy nofinofisiny teo am-piezahana handroso ka hahita ny toerany ao Madrid.
Toko valo no mamita ity famokarana Campanilla Films SL ity starring the same Abril Zamora, Juan Blanco, Nuria Herrero, Andrea Guasch, Marta Belenguer, Raúl Mérida, Miguel Bernardeau ary Alberto Casado, sns. April dia milalao an'i Dafne, ilay maherifon'ny andiany. Vehivavy iray manana asa fanariam-pako, izay narian'ilay olon-tiany fotsiny ary izay manambina azy rehetra dia hahita fa tena tia ny sakaizany akaiky izy, Asturianina tsy naka fanahy an'i Juan Blanco.
«Samy nino ny tantara ny HBO Europe sy i Mandarina nanomboka tamin'ny minitra voalohany ary tsy nanapaka ny elako izy ireo fa nomeny fahalalahana tanteraka hilaza izany tsy misy fetra ara-javakanto na famoronana, manatsara ny feoko sy ny mpanoratra ahy ary, rehefa manoratra zavatra manokana ianao, dia lafo sy fifaliana izany. Dingana mahafinaritra sy katolika izy io ary na dia somary ninia aza izany dia mahatsiaro tena ho voaro amin'ireo matihanina mahafinaritra vitsivitsy, izay namako ihany koa. Tsy afaka mangataka bebe kokoa aho », hoy ny fanazavan'ilay mpanakanto.
Ireo no premieres izay nohamafisin'ny HBO hatreto nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taona. Andian-tantara samy hafa be dia be avy amin'izy samy izy, izay hiatrika ny fankatoavam-bahoaka tsy ho ela. Te hahita an'ity andiany ity ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Andian-tsarimihetsika izay azonao jerena ao amin'ny HBO alohan'ny faran'ny taona
Urban Pleasures, fanangonana Mango vaovao ho an'ny fararano
Fetsy hialana amin'ny fofona ratsy ao anaty lalimoara